बेलायत प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा एकदम "परम्परागत" आउने। यो देश मा, एक राम्रो प्रतिष्ठा संग मान्छे विरलै मुख्य suspects बीचमा रेकर्ड छन्। पनि यस विषयमा यसो छ: "इङ्गल्याण्ड मा, सज्जनहरु शब्द मा विश्वास गर्छन्।" लामो समय सफलतापूर्वक न्याय परहेज, आफ्नो निर्दोष विरामीहरु हत्या - सम्मान र पहिलो नजर मा सकारात्मक एक मानिस - यो परम्परा हेरोल्ड Shipman धन्यवाद छ। आज डा मृत्यु भन्दा फरक यो offender छैन भनिन्छ, र सिकार गर्ने वास्तविक संख्या अझै अज्ञात छ।
जनवरी 14, 1946 - जन्म हेरोल्ड फ्रेडरिक Shipman। केटा सरल कार्यकर्ता को एक परिवार मा जन्मेका थिए, त्यो स्मार्ट पर्याप्त र विविध बच्चा, स्कूल प्रदर्शन उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदर्शन थियो। 17 वर्षको उमेरमा हेरोल्ड आफ्नो आमा जसको कारण मृत्यु एक गम्भीर क्यान्सर थियो, गुमाए। स्रोतको एक नम्बर को संस्करण अनुसार, यो यस घटना, जवान एक डाक्टर बन्न निर्णय पछि थियो। 1965 मा, भविष्यमा आपराधिक लीड्स मा चिकित्सा संस्थान को एक विद्यार्थी, एक वर्ष पछि यस शहर मा सामना केटी विवाह भयो। हेरोल्ड Shipman सिद्ध पति र पिता 1970 मा थियो, त्यो एक जीपी रूपमा चिकित्सा अभ्यास थाले, र आफ्नो पत्नी रजिस्ट्रीमा मा नै सुविधा काम गरे। विवाहमा, चार छोराछोरी थिए। 1974 मा Shimpan औषधि चोरी, narcotic प्रभाव possessing को दोषी थियो। अदालत मा दोकान शीर्षक र चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर को deprived को offender, साथै सजाय आदेश। तर तीन वर्ष पछि, दबाइ नशेडी लागि पुनःस्थापना एक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण गरे पछि, हेरोल्ड डाक्टर को शीर्षक, आफ्नो परिवार अर्को शहर सारियो पुनःप्राप्त - हाइड, र फेरि विरामीहरु लिन थाले।
आधिकारिक छानबिन को संस्करण अनुसार, हेरोल्ड Shipman 1984 मा आफ्नो पहिलो सिकार मारे। बुढेसकालमा एक महिला - घर मा राम्रो डाक्टर आफ्नो विरामीहरु को एक कारण। मुख्य उजुरी दुखाइ थियो। उनको कुरा सुनेर, र ध्यानपूर्वक रेकर्ड सबै लक्षण पछि Shipman शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि दबाइ को एक शट प्रस्ताव राखे। रोगी को सहमति प्राप्त भएको उहाँले तिनलाई diamorphine (लागु पदार्थ नेट) को एक इंजेक्शन दिए। मायालु डाक्टर उनले धेरै राम्रो महसुस भएको थियो भने हुँदा पनि आफ्नो pupils छोड्न कुनै हतारमा थियो। आतंकित गर्नु धैर्य साथ उहाँले बसे र दुखाइ को अभाव को आनंद, एक रोगी बिस्तारै मर्न हेर्नुभयो। यो भन्दा बढी हुँदा Shipman तालिका उभिएर बाँकी केही स्मृति चिन्ह, लिए। अर्को दिन, मानिन्छ गल्ति म महिला र निदान हेर्न गए "प्राकृतिक कारण द्वारा मृत्यु।"
उहाँले सबै को लाग्यो
पुरानो रोग को एक पूरी गुच्छा संग एक महिला आदरणीय उमेर मृत्यु, कुनै एक छक्क थियो। अझै हेरोल्ड Shipman सुरक्षित र शरीर को दाहसंस्कार मा जिद्दी। त्यतिबेला यो प्रक्रिया दुई डाक्टर को निष्कर्षमा आवश्यक छ। तर, पहल मा उहाँले, र देख बिना केवल एक व्यक्ति, र एकता को "गिल्ड" को नाम मा सहमत दोस्रो देखाए कागजात हस्ताक्षर गरे। तदनुसार, व्यापक प्रमाण को कठिनाई उठ्दा। पहिलो सिकार आफूलाई को शरीर को दाहसंस्कार पछि Shipman षडयंत्र को प्रतिभा र लगभग एक भगवान लाग्यो। तैपनि, उहाँले एक "शानदार" हत्या गरे पछि - धेरै रगत र कुनै पनि ट्रेस बिना। अचम्मको कुरा छैन, यो offender रोक्न होइन र चाँडै आफ्नो अनुभव पटक-पटक।
डा मृत्यु मुछिएको पहिलो घोटाले
आफ्नो सिकार को घरहरू स्मृति चिन्ह Shipman पहिलो हत्या देखि टिप्न थाले। चाँडै उहाँले आफ्नो अपराधको मात्र होइन साना trinkets सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बुझे। त्यसपछि डा मृत्यु इच्छा गाँस्न थाले, र पहिलो पटक, यी manipulations शङ्काको कारण छैन। र साँच्चै, के कसैले वृद्ध विरामीहरु आफ्नो मृत्यु पछि पैसा को प्रिय चिकित्सक नगण्य रकम छोड्ने निर्णय भने ठूलो सम्झौता हो? पूरा योद्धा औपनिवेशिक आक्रामकता को भावना नयाँ अपराधको लागि तरस गर्न वृद्धि दिनुभयो, र चाँडै हेरोल्ड Shipman (डा मृत्यु) पनि blatant घोटाला cranked। 1998 मा, हाइडी Ketlin Grandi को मृत्यु पछि, यो हुनेछ, मृतक को व्यक्तिगत चिकित्सक प्राप्त 350 हजार पाउण्ड जो अनुसार घोषणा गरेको थियो। जो पहिले मृत्यु शहर को मेयर थियो, र यसको वित्तीय अवस्था बारे प्रश्न उठ्छन् थिएन। तर इच्छा नै आफ्नो छोरी हाइडी, विधिशास्त्र को क्षेत्र मा काम गर्ने मा शङ्काको धेरै कारण। यस कागजातमा Shipman जानाजानी फन्ट वृद्धि र हिज्जे त्रुटिहरू धेरै बनाउन, एक वृद्ध हस्तलेखन थकित महिला फोटो प्रयास गरिरहेको छ। जबकि मृत छोरी चिटिक्क हस्तलेखन थाह र आमाले साक्षरता शङ्का छैन। इच्छा contested थियो, तर पनि तल शान्त छ कि छैन र उत्खनन र गरे मृतक को नातेदार गर्न पुन परीक्षा रह्छ को। परिणाम सार्वजनिक स्तब्ध: महिला diamorphine एक अधिमात्रा बाट मृत्यु भयो। हेरोल्ड Shipman त्यसपछि, ब्रिटिश अवधारणाहरु अनुसार अनुभव को धेरै वर्ष संग एक सम्मानित डाक्टर देखि अध्ययनहरू दस्तक किनभने उसलाई, जाने प्रहरी प्रश्न, तर सबै कुरा अस्वीकार गरियो, Unethical छ ...
शक र अफवाहहरु
वास्तवमा हेरोल्ड Shipman - डाक्टर, आफ्नो विरामीहरु थुप्रै अनौठो देखिन्थ्यो जो। को मृत्यु मान्छे को नातेदार उहाँले कहिलेकाहीं सानो सजावटी वस्तुहरू को लापता देख्यौं। यो मृत्युको कारण स्थापना, परीक्षा मा मरेको वा असफलता लाश जलाउनु गर्न असामान्य र जुनूनी सुझाव देखिन्थ्यो। तर बीच शोक अनुभव यस्तो कुरा महत्वहीन जस्तो, वास्तव मा, मान्छे यस्तो सकारात्मक व्यक्ति आफ्नो अनुमान र आफ्नो क्षेत्रमा एक साँचो पेशेवर संग प्रहरी जान लाजमर्दो गरिएको छ। हत्या ती को नातेदार मात्र डाक्टर को दोषी को व्यावहारिक पूर्ण प्रमाण पछि पुष्टि गर्न थाले।
को interrogations थिए Shipman को कुनै पनि परिणाम दिएको छैन। त्यसपछि गुप्तचरहरू उपचार समयमा अचानक मृत्यु exhumed शरीर र 15 विरामीहरु को खरानी को अदालती परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति छ। परिणाम स्तब्ध: यी सबै मानिसहरू एक दबाइ अधिमात्रा बाट मृत्यु भयो। पछि मुख्य संदिग्ध को कार्यालय मा एक खोज सञ्चालन र चिकित्सा इतिहास सधैं बिरामीको मृत्यु, मा दिन परिवर्तन धारिलो गिरावट को संकेत समावेश छ भनी हामीले देख्यौं। तथापि, सबै तथ्य बाबजुद, हेरोल्ड Shipman, उपनाम डा मृत्यु स्वीकार गर्न कुनै हतारमा थियो। त्यसको विपरीत, अदालत निर्णय को घोषणा सम्म, उहाँले सबै परीक्षा को परिणाम गलत हो भन्ने तथ्यलाई मा जिद्दी र उहाँले कसैलाई मार्न थिएन।
हत्यारा डाक्टर लागि वाक्य
आफ्नो अपराधको (15 मारता सिद्ध) को लागि हेरोल्ड Shipman 15 जीवन वाक्य सुनाइसकेको थियो। बेलायत व्यवस्था अनुसार, मृत्यु दण्ड मात्र एक भिक्षु को हत्या वा सिंहासनमा एउटा शासन हकदार लागि लगाएको हुन सक्छ। तर, धेरै रिजोल्युसन र परिमार्जन, यो यो व्यक्ति कहिल्यै मुक्त जानु पर्छ जोड थियो। केही स्रोतहरु अनुसार, जूरीको फैसला घोषणा गरेको थियो पछि, हेरोल्ड Shipman, जो एक फोटो पहिले नै क्याप्सन "ड मृत्यु" संग सबै समाचार पत्र मा, भएको उनको घुँडामा रो थियो, र मामला पुनर्विचार गर्न बिन्ती गरे। तर, को पाठ्यक्रम, यी अनुरोध गर्न सन्तुष्ट गरिएको र चाँडै हत्यारा वेकफिल्ड जेलमा आफ्नो वाक्य सेवा गर्न गए छ।
कथा हेरोल्ड Shipman को अन्त
2014 मा, डा मृत्यु आफ्नो कक्षमा फाँसी फेला परेन। पत्रकार तुरुन्तै "सर्वशक्तिमान", यसको राय मा, Shipman जीवन नै लिए जो परमेश्वरको मा खेल को अन्तिम कर्ड रूपमा घटना स्वराङ्कित। तर बढि prosaic संस्करण छ - अवस्था समाधान गर्न सबैभन्दा खराब तरिका छैन - शायद उहाँको स्थिति निराशजनक छ भनेर बुझे दोषी र आत्महत्या।
धेरै प्रश्न उनको मृत्यु पछि, उहाँले हेरोल्ड Shipman बाँकी। कसरी धेरै offender को खातामा सबै सिकार? आफ्नो वाक्य डा मृत्यु 15 सिद्ध मारता पायो, तर अचानक र suspiciously आफ्नो विरामीहरु बीचमा धेरै 136 रूपमा मानिसहरू मरे। धेरै रूपमा 508 मान्छे - अफवाह यो कि पहिले नै जेलमा Shipman भन्नुभयो सिकार धेरै कि छ। तर, सत्य कुनै एक कहिल्यै थाहा हुनेछ।
यो मानिसको मृत्युको समाचार, स्पष्ट कारण, सार्वजनिक, यदि छैन आनन्द संग, राहत केही लागि भेट भएको थियो।
यो नियमले बाँच्न कस्तो अर्थ राख्छ? चोर 'विचार। जेल कठबोली
कला। टिप्पणी संग रूसी संघ को 25 आपराधिक प्रक्रिया कोड
सर्गेई Golovkin, पागल: तस्बिर, जीवनी, अदालत
"Morozovka", Gazprom को बोर्डिंग बोर्ड: समीक्षाएँ
Bouffant सही कसरी?
पिउने देखि षडयन्त्र - हरियो ड्रागन छुटकारा रही
कानुनी निकायहरूको रूपमा गैर-मुनाफा। गैर-मुनाफा विभिन्न प्रकारका वित्त र लेखा नीतिहरू।
पोर्ट एल Kantaoui, टुनिशिया
नतालिया Andreichenko: जीवनी सोभियत मरियम Poppins
कान Otitis मिडिया: उपचार, लक्षण र कारण